Madaxweynaha Mareykanka uu digniin u direy dhigiisa Ruushka - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Madaxweynaha Mareykanka uu digniin u direy dhigiisa Ruushka
Madaxweynaha Mareykanka uu digniin u direy dhigiisa Ruushka
“Ma doonayno in aan dagaal la galno Russia waxaa rabnaa deganaansho iyo xiriir maangal ah,”.
Madaxweynaha Biden waxaa uu xusay in Mareykanka uu dib u soo laabtay isla markaana dimoqraadiyada dunida si wadajir ah u wajahayso caqabadihii ugu adag oo quseeya mustaqbalkeena.
Shirka dalalka hodanka ah ee G7 ayaa jimcaha ka furmi doono Cornwall oo ku taala koofur galbeed England, waxaana diiradda la saari doonaa wax ka qabashada dhibaatada aafada COVID-19 iyo sidii loogu diyaar garoobi lahaa safmarada kale ee mustaqbalka imaan doona.
Warbaahinta UK waxay soo warineysaa in Ra’isul wasaare Boris Johnson uu sheegay in shirka lagu qeexi doono heshiis cusub ee caalami ah kaas oo caddeynaya sidii la isugu diyaarin lahaa aafooyinka imaan doona.
Sidoo kale, warbaahinta Mareykanka ayaa dhankeeda tabisay in maamulka Biden qorsheeyeen in 500 oo milyan oo kuuro oo talaalka COVID-19 ah la siin doono ku dhowaad 100 dal labada sano ee soo socota.
Madaxweyne Biden, shirka G7 ka dib waxaa uu u safri doonaa dalka Belgium halkaas oo kula kulmi doono wasiirada dalalka Gaashaan-Buurta NATO isniinta soo socota sida uu qorshuhu yahay.
Xiriirka Mareykanka iyo NATO ayaa ahaa mid xumaaday xilligii maamulka madaxweynihii hore Donald Trump, xoghayaha ururkaas General Jens Stoltenberg oo isniintii tagay Aqalka Cad, ayaa sheegay in madaxweyne Biden uu u muujiyay sida ay uga go’an tahay in xulafada Mareykanka uu xiriir adag la yeesho.
Previous articleBadmaaxiin la socotay Markab Xamuul oo ku degay Xeebaha Somalia
Next articleDuqa Muqdisho oo sheegay inay kordhin doonaan qorshaha looga hortagayo COVID-19